China omenala ihuenyo ebipụta larịị dịghị ika adụ ndị nwoke isi gburugburu olu Heather agba tri-ngwakọta t uwe elu ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọhụụ
omenala ihuenyo ebipụta larịị dịghị ika adụ ụmụ nwoke isi gburugburu olu Heather agba tri-ngwakọta t uwe elu
Gini mere uwe elu triblend t ji dị mma? Mgbe onye ahịa m na-achọ ndụmọdụ maka ịhọrọ ihe a ga-eji na-eme uwe elu mgbe niile, amaara m nke ọma ịkwado ya. Ọ bụrụ na ị jụọ m ihe kpatara ya, m ga-agwa gị na ihe egwuregwu atọ bụ ihe dị nro ị ga-emetụ.
1.Why uwe elu triplend a ji maa mma? Mgbe onye ahịa m na-achọ ndụmọdụ maka ịhọrọ ihe a ga-eji na-eme uwe elu mgbe niile, amaara m nke ọma ịkwado ya. Ọ bụrụ na ị jụọ m ihe kpatara ya, m ga-agwa gị na ihe egwuregwu atọ bụ ihe dị nro ị ga-emetụ.
2.Ndị a na-ahụkarị ngwakọta bụ polyester, owu, na rayon ngwakọta. Ha abuo di nro ma buru oke ibu, na-abata na nari 140gsm, n'ile anya akpukpo ahihia. Ngwakọta ndị a gwakọtara agwakọta ogologo oge na silky ezigbo nkasi obi na-eyi. Polyester na-ejigide ọdịdị na ekwedo; Owu na-agbazinye ma nkasi obi na ogologo; Rayon na-eme ka a pụrụ iche udidi; Nsonaazụ mbipụta kachasị elu; Slimmer kwesịrị ekwesị karịa ụdị ụdị ị na-eme mgbe niile.
Size: anụ ọhịa
Osote: omenala ebipụta oghere polyester na-agba ọsọ t uwe elu logo
China Factory T uwe elu